Yeka ukuzifihla kubathengi bakho
NgoMvulo, Septemba 13, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UMichael Reynolds
Kusandothusa nangoku ukuba zingaphi iinkampani ezifihla kubathengi bazo. Bendisenza uphando kwiveki ephelileyo kubavelisi be-iPhone kuba ndinomthengi odinga usetyenziso lwe-iPhone. Ndibuze abanye abantu kuTwitter. Douglas Karr undinike ukuhanjiswa kwaye bendisazi ngokuthunyelwa kwincoko yangaphambili nomnye umhlobo. Ndaya kwiiwebhsayithi zeenkampani ezintathu ezahlukeneyo ndaza ndadana kwangoko.
Inkampani nganye ubunayo ubuncinci iwebhusayithi kodwa zonke bezingacacanga, zinqabile, ziyadika, okanye konke oku kungentla. Abakhange bathi ngokucacileyo "senza iiapps ze-iPhone" kwaye khange babonise nawuphi na umsebenzi wangaphambili okanye iscreen shots.
Kwaba kubi ngakumbi xa ndisiya kwiphepha labo lokunxibelelana. Khange ndibone nombolo yefowuni, idilesi, okanye ngamanye amaxesha nedilesi ye-imeyile. Uninzi lwalunefom yoqhakamshelwano elula.
Nangona ndizalise iifom zonxibelelwano, bendiziva ndikhathazekile. Ngaba ezi nkampani zazisemthethweni? Ngaba ndingabathemba ngemali yomthengi wam? Ngaba baya kwenza umsebenzi olungileyo? Umthengi wam ufuna umntu wasekhaya- ngaba bakwindawo yase-Indianapolis?
Umthengi wam yinkampani yezigidi ezivelisa iidola kwaye kufuneka ndikwazi ukuzithumela komnye umntu ngokuzithemba. Ukuza kuthi ga ngoku bendingaqinisekanga ukuba ndiyifumene na inkampani eyiyo.
Emva koko, ndafumana olunye ugqithiso kwi-Twitter ukusuka UPaula Henry. Undithumele kwinkampani. Xa ndaya kwiwebhusayithi yenkampani, ndathengiswa. Nasi isizathu:
Babenayo iwebhusayithi entle lonto ibenza babonakale njengenkampani yokwenyani
Babonisa eyona isikrini somsebenzi wangaphambili
bona chaza ngokucacileyo into abayenzayo: “Siphuhlisa usetyenziso lwe-iPhone”
Bazi esebenzayo kwi-Twitter kwaye babonise iincoko zabo ze-Twitter kwiwebhusayithi (ndingabafumana ukuba bathethe nabo)
Iphepha labo lokunxibelelana linedilesi ye-imeyile, idilesi yendawo, kunye inombolo yomnxeba
Ngamafutshane, inkampani yenze kwalula ukuba ndibathembe. Nditsalele umnxeba ndashiya i-voice mail kwaye ndafowunelwa emva kweyure. Ndibuze imibuzo kwaye ndafunda ngakumbi ngomsebenzi wabo wangaphambili. Ngoku ndiza kusebenza nabo ukuphuhlisa usetyenziso lwe-iPhone kumthengi wam.
Umfanekiso owubonisa kwi-intanethi, umyalezo onxibelelana nawo, kunye nokukhululeka kokunxibelelana nawe kwenza umahluko omkhulu kubathengi bakho. Zenzele lula ukwenza ishishini.
tags: zoqhagamshelwanoinombolo YOQHAGAMSHELWANOiphepha loqhagamshelwanoukufihlaUPaula henry